Isakhiwo esidala salungiswa kumbindi weBelledonne
Isakhiwo esidala esihlaziyiweyo senkulungwane ye-14 esimalunga ne-120m2 esikwi-BAYS kwi-Belledonne massif, imizuzu engama-35 ukusuka eGrenoble naseChambéry kunye nemizuzu eli-10 ukusuka kwi-7 LAUX Prapoutel Pipay ski resort.
Ilungele abathandi bendalo abafuna ukuqhawuka, indlu ijikelezwe lihlathi kwaye yakhiwe yimijelo emi-2.
Indlu ingahlala abantu aba-6.
Umgangatho ophantsi uquka igumbi lokuhlala le-30m2 kunye nesitovu somthi (ubonelelwa ngamaplanga), isofa kunye netafile yekofu; Ikhitshi eliyi-19m2 eline-oveni, imicrowave, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu sokungeniswa, i-extractor, ifriji enendawo yesikhenkcisi, itoaster, umenzi wekofu. Izitya kunye neekhitshi zilungele abantu aba-6. I-Raclette, i-fondue kunye noomatshini beplancha abakhoyo xa beceliwe.
Ibarbecue ye-weber kunye netafile yegadi + izitulo + i-parasol onayo ukuze ukwazi ukonwabela nangaphandle.
Igumbi lokuhlambela lokuqala le-6m2 elinesinki ephindwe kabini, ibhafu kunye nesomisi setawuli ikwakumgangatho ophantsi kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Akukho matshini wokuhlamba (indawo yokuhlamba impahla ePrapoutel 10 min kude).
Kumgangatho woku-1 kukho amagumbi okulala ama-3 ane-13, 14 kunye ne-15m2 ngalinye linebhedi ephindwe kabini (i-duvet nemiqamelo ikhona, nceda uze namaphepha akho). Elinye lamagumbi okulala lidityaniswe negumbi lokuhlambela le-2 le-4m2 elinesinki, ishawa kunye nethawula eshushu. Indlu yangasese eyahlukileyo nayo ibekwe phezulu.
Indlu ixhotyiswe nge-WIFI, inethiwekhi ye-4G ikhona kodwa ingekho kwinqanaba eliphezulu kwaye akukho mabonakude.
Kuyenzeka ukuba urente ilinen yokulala nge-euro ezi-8 ngomntu ngokuhlala.
Jeune couple qui aime les voyages, les activités sportives (snowboard, randonnée, escalade, surf,...) et la nature
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Theys